ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံး အလိုအလျောက် ရာသီဥတုစောင့်ကြည့်ရေးစခန်းကို ချိုမိုလန်းမားတောင်ပေါ်တွင် တည်ဆောက်နေ - Xinhua News Agency
ချိုမိုလန်းမားတောင်ပေါ်တွင် ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် မီတာ ၅,၂၀၀ ခန့်၌ အလိုအလျောက် မိုးလေဝသစခန်းတစ်ခုအား ဧပြီ ၂၄ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
လားဆာ၊ မေ ၄ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံမှ သိပ္ပံပညာရှင်များသည် တရုတ်-နီပေါနယ်စပ်ရှိ ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံးတောင်ဖြစ်သော ချိုမိုလန်းမားတောင် (Mount Qomolangma) ပေါ် ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် မီတာ ၈,၈၀၀ တွင် မိုးလေဝသဆိုင်ရာ စောင့်ကြည့်ရေးစခန်းတစ်ခု တည်ဆောက်ရန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။အကယ်၍ အဆိုပါ စခန်းအား အောင်မြင်စွာတည်ဆောက်ပြီးပါက ဗြိတိန်နှင့် အမေရိကန် သိပ္ပံပညာရှင်များက ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ချိုမိုလန်းမားတောင်၏ တောင်ဘက်ခြမ်းပေါ်၌ တည်ဆောက်ထားသော စခန်းနေရာတွင် အစားထိုးလာမည်ဖြစ်ကာ ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံးစခန်းအမျိုးအစားဖြစ်လာမည်ဟု တရုတ် သိပ္ပံအကယ်ဒမီ၊ တိဗက် ကုန်းပြင်မြင့်သုတေသနအဖွဲ့အစည်း (ITP) အရ သိရသည်။
ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် မီတာ ၅,၂၀၀ ရှိ ချိုမိုလန်းမားတောင် အခြေစိုက်စခန်းအား မေ ၁ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
လက်ရှိတွင် စခန်းတည်ဆောက်ရေး တာဝန်ယူထားသော အင်ဂျင်နီယာများသည် တောင်တက်ရေးအတွက် ရာသီဥတု ကောင်းမွန်ရန် စောင့်ဆိုင်းနေဆဲဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
လေထုတိုင်းတာမှုမြှင့်တင်ရေး မိုးလေဝသစခန်း ၈ ခုပါဝင်သော အမြင့်ဆုံးစခန်းကို ချိုမိုလန်းမားတောင်ပေါ်တွင် တပ်ဆင်မည်ဖြစ်ကာ အမြင့် မီတာပေါင်း ၈,၈၄၈.၈၆ ရှိသော ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံးတောင်ပေါ်၌ တရုတ်နိုင်ငံ၏ သိပ္ပံပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဘက်စုံစူးစမ်းလေ့လာမှုအသစ်တွင် အဓိကလုပ်ငန်းတာဝန်များအနက် တစ်ခုဖြစ်လာမည်ဖြစ်သည်။
ချိုမိုလန်းမားတောင်ပေါ်ရှိ အလိုအလျောက် မိုးလေဝသစောင့်ကြည့်ရေးစခန်း တည်ဆောက်ရာသို့ သွားရောက်နေသည့် တိဗက်ကုန်းပြင်မြင့်သုတေသန အဖွဲ့အစည်း (ITP) မှ သုတေသီ Zhao Huabiao အား ဧပြီ ၂၈ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
မိုးလေဝသစခန်း သုံးခုကို ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင် ၇,၀၂၈ မီတာ၊ ၇,၇၉၀ မီတာနှင့် ၈,၃၀၀ မီတာတို့၌ တောင်၏ မြောက်ဘက်ခြမ်းတွင် ယခုနှစ် အစောပိုင်းက အသီးသီးတည်ဆောက်ထားကြောင်း၊ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် မီတာ ၅,၂၀၀ နှင့် မီတာ ၈,၃၀၀ ကြားရှိ လုပ်ငန်းလည်ပတ်သော မိုးလေဝသစခန်း အရေအတွက်မှာ ၇ ခုအထိ ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း ၊ ယမန်နှစ်က ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင် မီတာ ၆,၅၀၀၊ မီတာ ၅,၈၀၀ ၊ မီတာ ၅,၄၀၀ နှင့် မီတာ ၅,၂၀၀ တို့၌ အသီးသီး တည်ဆောက်ထားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် မီတာ ၅,၂၀၀ ရှိ ချိုမိုလန်းမားတောင် အခြေစိုက်စခန်းအား ဧပြီ ၃၀ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ချိုမိုလန်းမားတောင်ပေါ်၌ သိပ္ပံပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဘက်စုံစူးစမ်းလေ့လာရေးအသစ်သည် ချင်းဟိုင်-တိဗက် ကုန်းပြင်မြင့်ပေါ်တွင် ၂၀၁၇ ခုနှစ်က စတင်ခဲ့သော တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဒုတိယမြောက် သိပ္ပံပညာရပ်ဆိုင်ရာ သုတေသနလေ့လာဆန်းစစ်မှု၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ချင်းဟိုင်-တိဗက် ကုန်းပြင်မြင့်သည် ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုနှင့်အတူ ပြောင်းလဲလာသောပူနွေးမှုကို ရင်ဆိုင်နေရကြောင်း၊ ကုန်းပြင်မြင့်ပေါ်၌ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် မြင့်လာလေ အပူချိန်မှာလည်း မြင့်တက်လာလေဖြစ်ကြောင်း ITP မှ သုတေသီ Zhao Huabiao က ပြောခဲ့သည်။
ယင်းသို့သုံးသပ်ချက်မှာ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အောက် မီတာ ၅,၀၀၀ ရှိ ရာသီဥတုစခန်းများ၏ အချက်အလက်များအပေါ် အခြေခံထားခြင်းသာဖြစ်ပြီး အဝေးထိန်းအာရုံခံအချက်အလက်အရ ခန့်မှန်းတွက်ချက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် မြင့်မားသော စခန်းများမှ ရာသီဥတုစောင့်ကြည့်လေ့လာရေး အချက်အလက်များမှာ ယခင်က ပျောက်ဆုံးနေခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
စခန်း ၈ ခုသည် ချိုမိုလန်းမားတောင်၏ မြောက်ဘက်ခြမ်းရှိ လေတိုက်နှုန်းနှင့် လေကြောင်းဦးတည်ရာအချက်အလက်အပြင် လေထုအတွင်းစိုထိုင်းဆကို စုဆောင်းထားမည်ဖြစ်သလို လေထုတိုင်းတာမှုမြှင့်တင်ရေး မိုးလေဝသစခန်းစနစ်ကလည်း ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် မြင့်မားသောနေရာ၌ တောင်ပေါ်ရှိ ရေခဲများနှင့် ဆီးနှင်းများ အရည်ပျော်မှုစောင့်ကြည့်ခြင်းအတွက် ကြီးမားအရေးပါကြောင်း Zhao က ပြောကြားခဲ့သည်။
စူးစမ်းလေ့လာရေးအဖွဲ့ကလည်း တောင်ထိပ်ပေါ်ရှိ ရေခဲပြင်ရေဒါနှင့် ဆီးနှင်း ထူထပ်မှုနှင့် ရေခဲထုအား တိုင်းတာခြင်းကို တပ်ဆင်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။ (Xinhua)
China Focus: World’s highest automatic weather station to be set up on Mt. Qomolangma
LHASA, May 1 (Xinhua) — Chinese scientists are mounting efforts to establishameteorological monitoring station at an altitude of 8,800 meters on Mount Qomolangma, the world’s highest peak, on the China-Nepal border.
Including the highest, eight elevation gradient meteorological stations will be set up on Mount Qomolangma, one of the main tasks in China’s new comprehensive scientific expedition on the world’s highest peak at the height of 8,848.86 meters.
The expedition team will also set up glacier radar and measure the thickness of snow and ice at the summit of the mountain, he said. ■
Photo 1 : Photo taken on April 24, 2022 shows an automatic meteorological station set up at an altitude of about 5,200 meters on Mount Qomolangma.(Xinhua)
Photo2: Aerial photo taken on May 1, 2022 showsaview of the Mount Qomolangma base camp at an altitude of 5,200 meters.(Xinhua)
Photo3: Photo taken on April 24, 2022 shows an automatic meteorological station set up at an altitude of about 5,200 meters on Mount Qomolangma.(Xinhua)
Photo4: Zhao Huabiao,aresearcher with the Institute of Tibetan Plateau Research (ITP), Chinese Academy of Sciences, is seen on his way to set up an automatic weather station on Mount Qomolangma, April 28, 2022.(Xinhua)
Photo5: Photo taken on April 30, 2022 showsaview of the Mount Qomolangma base camp at an altitude of 5,200 meters.(Xinhua)